SAWIRRO: Haweenay FARO ka haysa madax kala duwan oo gacanta lagu hayo (Madaxwaynayaal ka mid ah dadka xiriirka la lahaan jirey) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka SAWIRRO: Haweenay FARO ka haysa madax kala duwan oo gacanta lagu hayo...
(Bradford, NH) 07 Luulyo 2020 – Haweenayda sharaf dhacday ee Ghislaine Maxwell ayaa la sheegay inay heeyso cajalado jinsi ah oo la duubay xilligii Jeffrey Epstein oo la isku dhex wado in uu is daldaley iyo in la diley, iyadoo u adeegsan doonta caymis ahaan, sida uu qorayo facsharka DailyMail.com.
Maxwell, 58-jir, ayaa lasoo qabtay iyada oo ku dhuumaalaysanaysa guri wayn oo ku yaallla Bradford, New Hampshire Khamiistii, waxaana lagu haystaa 6 dembi federaal oo ay ku jiraan u galmoodka ama qalqaalinta inay rag kale u galmoodaan carruur aan qaan gaarin, tahriibin jinsi iyo been loo sheego hay’aadka dowladda.
Haweenaydan British-ka ah ayaa aad ugu dhowayd Epstein oo ay ugu qaybsanayd inay usoo hesho hablaha da’da yar, iyadoo weerar guri uu milyaneerkaasi ku lahaa Manhattan laga soo helay kumannaan dokumenti oo muujinaya gabdho yar yar oo qaawan.
Haweenaydan ayaa la sheegay inay iyaduna hayso cajalado badan oo ay qaarkood ku jiraan madax sar sare oo asxaab lahaa Epstein, iyadoo haddii ay FBI-du heshiis ogolaadaan diyaar u ah inay isku furato.
”Haddii ay Ghislaine dhulka gasho, waxay faraqa qabsanaysaa oo la quusaya qaar badan oo kale.’ ayuu yiri qof aad u yaqaan iyada oo aan isa sheegin.
Dadka ay Maxwell taqaan ee ninkan saaxiibka lahaa ayaa waxaa ka mid ah MW Donald Trump iyo xaaskiisa Melania. Bill Clinton, oo isagu dhowr mar ku duulay dayuuraddii Lolita Express isla markaana ay ka qayb gashay arooska gabadhiisa Chelsea 2010, ayaa isna ku jira.
Waxaa kale oo ka mid ah Amiirka Britain ee Prince Andrew, jilaaga sharaf dhacay ee House of Cards ee Kevin Spacey iyo dad kale oo aanay qaarkood Maraykanba ahayn.
Epstein ayaa sidoo kale la sheegay inuu xogahaa oo kale hayey, balse isaga oo xiran ayaa la sheegay inuu isku daldaley xabsiga dhexdiisa, iyadoo ay qoyskiisu sheegeen in la diley si loo qariyo ceebaha uu isna kashifi karo.
Previous article”Qaata qoraallo un baan soo saaraynaa!!” – Wargays kashifay dalal Carbeed oo Israel u fasaxay inay qaadato dhulka Falastiin (Magacyadooda)
Next articleDEG DEG: Madaxwayne karoonaha YASI jirey oo uu soo ritey (Dalkiisa oo ay kiisasku faraha kasii baxayaan)